အီးမကြောက်လျင် အက်စ်တက်မည် - Neoxian City
ဒီနေ့သည် ပုံမှန်နေ့များထဲက တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုက်ဗ်ပျိုးခင်းများအကြား လူးလာခေါက်တုန့် အဖူးအပွင့်များ ပွင့်လန်းစည်ကားနေသည်ကို လိုက်လာကြည့်ရှုရင်း ပီတိဖြစ်နေမိသည်။
သူများတကာတွေ တိုးတက် အောင်မြင်နေကြသည်ကို မြင်ရ၍ ဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ရသလို။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုနေသေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
နေ့စဉ်ပိုစ်များဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ရေးနိုင်တင်နိုင်နေကြသော စာရေးသူများကို ချီးကျူးမိသည်။ ကျွန်တော့မှာတော့ စာရေးရန် စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အတွေးတို့က ဘယ်ဆီရောက်ရောက်သွားမှန်းမသိ၊ ဝေလေလေဖြစ်၍နေသည်ကများသည်။
သို့နှင့် စာကောင်းမထွက် ပိုစ်ကောင်းမတက်နိုင်ချေရှိနေတော့သည်။ သို့သော်လည်း ယမန်နေ့များဆီက သူများများကွန်မြူနတီများကို လိုက်လံလေ့လာရင်း သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ အမှိုက်များအား ရှင်းလင်းပေးသည့်အကြောင်း ပိုစ်များအား အထောက်အပံ့ပေးနေသော ကွန်မြူနတီအားတွေ့ရှိရ၍ ကျွန်တော်လည်း ပါဝင်လိုကြောင်း ထိုကွန်မြူနတီ၏ ပိုစ်အောက်တွင် သွား၍မန့်ကြည့်မိသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ကွန်မြူနတီမှ ကြိုဆိုကြောင်း ပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ အမှိုက်များ ရှင်းလင်းနေကြောင်းအား ပိုစ်များရေး၍တင်ပါ၊ သူ့ကိုလဲ တက်တွဲပါဟု ပြောလာပါသည်။ ထို့နောက်နေ့တွင် ကျွန်တော်လည်း အစမ်းပိုစ်တစ်ပုဒ်တင်ကြည့်ရာ ထိုကွန်မြူနတီမှ အားပေးထောက်ခံပီး ဘုတ်များလာရောက်ပေးကြသည်။
ကျွန်တော့အနေနှင့် မိမိတို့ မြန်မာကွန်မြူနတီအကြောင်းမပြောပဲ အခြားသော ကွန်မြူနတီအကြောင်းကို အသားပေး၍ပြောနေခြင်းမဟုတ်ချေ။ ကမ္ဘာကြီးသည် ရွာကြီးတစ်ရွာသာဖြစ်သည်၊ ကျွန်တော်တို့သည် ခေတ်သစ် ဘလော့ချိန်းကြီးပေါ်တွင် ရှိနေကြသည်။ ဤဟိုက်ပလက်ဖောင်းကြီးသည် သုံးမကုန်ဖြုန်းမကုန် လိုတာအကုန်ရှိသောဟင်းလေးအိုးကြီး ဖြစ်ကြောင်းသိလာရသည်နှင့်အညီ အခြားသော ကွန်မြူနတီများကို ဆက်သွယ်၊ လေ့လာ၊ ချိတ်ဆက်သင့်ကြသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော်တို့သည် အိမ်တွင်းအောင်း အပျိုကြီးများ လုပ်မနေသင့်ပေ အခြားသော ကွန်မြူနတီများကို လိုက်လံလေ့လာကာ ကျွန်တော်တို့နှင့် အလျင်းသင့်သော ကွန်မြူနတီများတွင် ထိုကွန်မြူနတီ၏ ဆောင်ပုဒ်စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာကာ ပိုစ်များရေးတင်ကြလျင်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ကြမည်ဟု ကျွန်တော်မှ အကြံပေးလိုပါသည်။
သူများကွန်မြူနတီများ ရေးလျင်ဖြင့် အီးစကေး အနည်းငယ်တော့ အသုံးပြုရမည်။ အီးစကေးကို မကြောက်ပါနှင့် ဂူဂဲလ်ထရန်စလိတ်ကြီး တစ်ခုလုံးက မြန်မာယူနီကုတ်ကို အပြည့်အဝ ဘာသာပြန်ပေးနေပါသည်။ အချိန်လေးအနည်းငယ်ပေးကာ ညှစ်ထုတ်ရေးကြည့်ကြပါ။ ကျွန်တော်ထင်ပါသည် အီးစကေး သုံးပုဒ်ခန့်တင်ပီးလျင် အီးကိုမကြောက်တော့မှာ မြင်ယောင်မိပါသေးသည်။
တို့မြန်မာတွေ အီးမကြောက်တာ လက်စွမ်းပြလိုက်စမ်းဘာ။ အီးမကြောက်သောမြန်မာများ ပိုစ်တစ်ပုဒ်လျင် ကျပ်ဂဏာန်းများစွာ ရရှိနေကြသည်ကို အားကျစေချင်သည်။ သူတို့အီးမကြောက်တော့ သူတို့ပိုစ်တွေ အက်စ်($)တွေတက်လာနေသည်ကို အားကျစေချင်သည်။ ကျွန်တော်ကတော့ အီးမကြောက်တော့ပါကြောင်း ---။
မြန်မာဟိုက်အဖွဲ့သားများ ကျန်းမာ၍ ဘေးကင်းကြပါစေ။
hive-122133 hive-list trafficinsider proofofbrain blog neoxian sharing archon palnet writing
ဟုတ်တယ် မြန်မာတွေ ထိုးဖောက်ချိန်ကျပီ။ !LOLZ !PIZZA
ထိုးဖောက်ရမှာပဲလေ နို့မို့ဆို ကျန်ခဲ့မှာပေါ့ !LOLZ
@kachinhenry(14/20) tipped @nyimwa (x1)
အီး မကြောက်ဖူး ကွ။
လုပ်ထားဗျို့ ။ !LOLZ
အားပေးတယ်ဝေ့....!PIZZA. !LUV. !LOL
အားတက်လာပီပေါ့ဗျာ ။ !LOLZ
ဟုတ်ပဗျာ ကြံဖန်ရေးလိုက်ရတာ !LOLZ